“हो, मान्छेको सबैभन्दा ठूलो साथी पनि मान्छे नै हुदोरहेछ र सबैभन्दा ठूलो शत्रु पनि मान्छे नै !” अहिले मान्छेमान्छेबीच त्यही भइरहेछ ।
उसले छोटो समयामा धेरै पात्रहरु बनाई ज्ञात-अज्ञात ! अज्ञात पात्रहरु उसकलाई मात्र थाह छ ज्ञातपात्रहरुमा रुद्रराज, जावेद खान, मक्करध्वज, भमरलाल, माकुरमाणि, मुनिर मियाँ आदि । जति छिटो उसले ति पात्रहरु कमाई त्यति नै छिटो धेरैलाई गुमाई पनि !
मक्करध्वजसँग सबैभन्दा ठूलो दुष्मनी छ । जतिचाँडो उनीहरु नजिकिए त्योभन्दा चाँडो टाढा पनि । न मक्करध्वजले उसालाई देखेको थियो न उसले मक्करध्वजलाई ! देखेपछि- भेटेपछि न मक्करध्वजले सोचे जस्तो उ थिइ न उसले सोचे जस्तो मक्करध्वर ! केही दिनको सहबास पछि दुबैको उठिबास भयो । एकले अर्कालाई फूटेको आँखाले देख्न नसक्ने भए । मान्छेको शत्रु मान्छे नै भयो ।
मान्छेले मान्छेसँग नै आफूलाई सबैभन्दा सुरक्षित पनि ठान्छ र सबैभन्दा असुरक्षित पनि ! र, मान्छे मान्छेसँग नै सबैभन्दा निर्भय पनि हुन्छ र भयभीत पनि ! अहिले उनीहरुबीच त्यही हुन थाल्यो, उनीहरु आफूआफूबीच भयभीत र असूरक्षित हून थाले ।
मक्करध्वजले भन्थ्यो – ‘यसले हरेक लोग्ने मान्छेलाई मोहनी लाएर डस्छे यो कालीनाग हो ! लोग्नेमान्छे देख्नै हुदैन ।‘
उ भन्थी – ‘मैले यसलाई जे जस्तो सोचेको थिएँ यसमा त्यो पाइँन । यो मान्छे होइन !’
शब्दजालले जेलिएको उसको उत्तरभित्र आत्मियताको भन्दा पनि आत्मपरागको दूर्गन्ध वढी आउथ्यो । त्यहाँ मान्छे-मान्छेबीचको सम्वन्धभन्दा पनि नारी-पुरुषको सम्वन्धको हरक बढी चलेको आभाष हुन्थ्यो । मक्करध्वजले उसलाई गुपचुप ल्याउनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरेको थियो । आखिर त्यो छताछुल्ल भएर पोखिन थाल्यो र फैलिन थाल्यो रछानको दूर्गन्घ जस्तै ।
एक अपरिचित पुरुष मक्करध्वज र उ एउटी अन्जान नारी ! उ आउन तयार भइ र सँगै बस्न दुबै तयार भए ! यद्यपि उसले आफूलाई एक चर्चित र प्रतिष्ठित पुरुषकी श्रीमती बताउथी । उसको आफ्नो परिचयको उठान श्रीमान्को नाउँबाट हुन्थ्यो र विस्तारै श्रीमान्प्रति घृणा ओकल्न थाल्थी । अनि साहानुभूति बटुल्थी ति पात्रहरुको । नाटक मञ्चनको पहिलो भाग यहीबाट शुरु हुन्थ्यो । मक्करध्वजदेखि शुरु भएको यो कथा मुनिरसम्म आइपुगेको छ, टुंगिएको छैन ।
मक्करध्वज पलायन हुने भयो । उसले जावेदको साहार लिई । जावेद साहु हो । साहु, बाउ र राहु एकै हुन्- यीसँग सबै डराउँछन् । तर उ डराउँदिन । सपेराका वशमा नाग हैन नागका वशमा सपेराहरु छन् । जावेद पनि एउटा सपेरा हो - नागीनको इसारामा नाचिरहेछ ! जावेद हरेक दुइ दिनमा त्यहाँ पुगेको हुन्थ्यो । जसरी अहिले भमरलाल स्वास्नीका आँखामा छारो हल्दै सारा कामधन्दा छोडेर धाइरहेछ । उता मुनिर मियाँले आफ्नै ठानेर बसेको छ ! बुढो भमरलाल खुशी छ, भन्छ - प्रेमको अर्थ अहिले भरखर बुझेको छु । साठी वर्षको भमरलालले अहिले आएर आफ्नी श्रीमतीमा रछान र कालीमामा कानन बगैंचा देख्न थालेको छ । उसले आफूलाई इन्द्र र कालिमालाई उर्वशी देख्न थालेको छ ! अहिले संसामा उभन्दा सुन्दरी, जाती र असल मान्छे उसका लागि कोही छैन । पछिल्लो पात्र मुनिरका वारेमा उ अनभिज्ञ छ । जावेद पनि पन्छिइसेकेको छ । मक्करध्वज आफैं पन्छिएकोमा अझ खूशी छ उ ! भमरलालले पनि कालिमा र माकुरमणि बाहेक अरुको बनौट नै दोषि देख्छ- भमरलाल अघि जावेदले जस्तै ! विशुद्ध नीरकल्मष देख्छ कालीमालाई सधैं ! माकुरमणिले अरुलाई जस्तै भमरलाई पनि झूठको लेपनले पोतेर फूरफूर बनाइदिएको छ ।
खेल सुरु जावेद र मक्करध्वजबाट हुन्छ । बीचमा कागजस्तो माकुरमणि छ, कठियाजस्तो छ मक्करध्वज ! पराजित हतास र निरुपाय मक्करध्वज आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं जाकिएको महशूस गर्छ । पलायन भन्दा उसँग अरु कुनै उपाय बाँकी छैन ।
जावेद र उ अर्थात कालिमा ! उनीहरु कहिले किनमेलमा, कहिले घुमफीरमा, कहिले डिनरमा ! कहिले कता, कहिले कता ! तर हरेक दिन उनीहरु बाहिर कतै जानु अघि कोठामा जान्छन् ! कालिमाको यो लिला-खेला निरिह कठियाकाँटे मक्करध्वज हेरिहन्छ । जावेदले किनिदिएको कोटको चर्चा शहरभरी छ ।
मक्करध्वज मुर्मुरिन्छ आफ्नै टाउकाँ’ धारे हाल बजार्छ – ‘यसलाई नल्याएको भए यो देख्नु पर्ने थिएन, के दिनमा ल्याएँछु !’ मक्कर ध्वजले सोच्छ - यो कामविषमा लठ्ठिएकी कालीनागसामू बस्नु भन्दा पलायन हुनु नै ठीक हुन्छ । उसले आफ्नो धरातल गुमाइसकेको छ । मक्करध्वजको पलायनले अब अझ स्वतन्त्र भए उनीहरु । स्वतन्त्रतामाथि स्वतन्त्रता थपियो । चरित चर्चा चल्न थाल्यो उनीहरुको चारैतिर ।
जावेद खान भन्दा अघिल्लो पात्र रुद्रराज हो । र यो कथाको मुख्य पात्र पनि रुद्रराज नै हो । रुद्रराज पनि अहिले कालिमाको आँखाको तारो बनेको छ । उसले भन्नु-नभन्नु कुरा काटी, रुद्रराजको खोइरो खनी माकुरमणिसँग ! तासको जोकरजस्तो माकुरमणि यो दुनियाँको अद्भूत् पात्र हो । मुख खोल्नु अघि नै झूठो बोल्न सुरु गर्ने कालिमा र मुख खोल्दादेखि नै झूठो बोल्न शुरु गर्ने माकुरमणि अनवरत झूठैझूठमा बाँचेका सृष्टिका दूइखुट्टे नवप्राणी हुन् ! दुबैले झूठको खेतीमा एकअर्कालाई साथ दिएका छन् ।
‘छुचुन्द्राको जस्तो अनुहार, कागको जस्तो व्यवहार, लाटोकोसेराका जस्ता आँखा ; मलाई त त्यो मान्छे र्हेर्दै डरलाग्छ, छेउमा आँउदै डराउँछु - उसले रुद्रराजसँग भनेकी थिइ । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ । उसले मकुरमणिलाई सात दिन मै चिनिसकेकी थिइ रुद्रराजले सात वर्ष भयो चिन्न सकेको थिएन ।
चोरसँग चोरको, साधुसँग साधुको सँगत - अब माकुरमणिसँग उसको राम्रो सँगत शुरु भयो । साराका कुरा काट्ने, खोइरो खन्ने, दिन बिताउने- बिहान उठेदेखि बेलुकी सुतुन्जेल दैनिकी नै त्यही भो । अति घनिष्ठ भए एकअर्काका ! एकले अर्काको महिमागान गाउन शुरु भयो ।
मक्करध्वजसँगको विकर्षणसँगै रुद्रराजप्रति आकर्षणको जाल फिजाउन थालेकी थिइ । रुद्रराजको फोन पत्ता लगाइ । दिनमा दशौंपटक रुद्रराजलाई उसको फोन आउन थाल्यो । परदेशको ठाउँ- अन्ततः शिष्टाचारका लागि भए पनि रुद्रराज “रेस्पोन्स” गर्न वाध्य भयो । रात, बिहान, दिन कुनै यस्तो समय थिएन उसको फोन नआएको होस् । दोहोरा कुराकानी र वार्तालापहरु हुन थाले । “रातको निद्रा न दिनको भोक” उ लगातार-लगतार फोन गरिरहन्थी र अनके निहूँ, बहना र उपायले रुद्रराजलाई बोलाउन चाहन्थी । ईश्वरकोभन्दा बढी प्रशंषा रुद्रराजको गर्न थाली । आखिर प्रंशाषाको भोको को छैन ? अनि प्रशंषाबाट खुशी नहुने मान्छे नै को छ र ? अझ लोग्नेमान्छे न हो- स्त्रीका सामू बलेको मैन जस्तो भै नै हाल्छ ! अन्ततः उ सफल भइ - रुद्रराज उसले भनेको समय र स्थानमा पुग्यो जहाँ उ काम गरिरहेकी थिइ ।
कुरै कुरामा रुद्रराजले एकदिन भनेको थियो – ‘मेरो कलेस्ट्रोल “हाई” छ । “हाई” कलेस्टोलको सबैभन्दा राम्रो दबाइ “सेक्स”हो ।‘ - उसले ठाडै भनेकी थिइ ।
उसले उसँग पनि त्यही गरी- सायद अरुसँग जस्तै ! बहाना बनाएर रुद्रराजलाई पनि कोठामा लगि- केही सामान लिनु छ भनेर ! उसले ढोकाको चुक्कुल लगाई झ्यालको पर्दा खसाई ।
एकैछिनमा उसका कालाकाला गाला नीला भए बिष भरिए जस्ता । आँखाबाट धुवाँ निस्के जस्तो भएको थियो । श्वासप्रश्वास बढेको थियो । अलि भित्र गाडिएका आँखा ओरिपरीको चाउरीसकेको कालो छाला पनि सबै नीलमय हुदै थियो । उसको सम्पूर्ण अनुहारमा बिष चढको जस्तो भै सकेको थियो । अधवैशे वैंशमा पनि वैंशको जस्तो अन्धवेगात्मक रागोन्मत विष शरीरमा चढिरहेको थियो । बिषले शतचूर्ण नागले फणा फूलाएर अन्धाधुन्ध डस्न खोजे जस्तो झम्टिन खोजिरहेके थिई कालीनागले जस्तो- रुद्रराजमाथि उ ! रुद्रराजले पनि वैंशको विषले मदमत्त लठ्एिको कालीनागको रुप देख्यो कालिमामा ! कुनै प्राणहिन वस्तुका बोक्रा उधारे जस्तो अब उ उधार्नथाली प्राणमय आफ्नै शरीरका पत्रैपत्र परिधानहरु - आँखा चिम्लेर !
एकतमासले हेरिहेको छ रुद्रराज - त्यो अधवैशे वैशका उराठलाग्दा पटाक्षेपहरु शालिक जस्तो उभिएर फन्फानाएकी नागदेवी सामुन्ने । खरानी घसेजस्तो कालो फुस्रो शरीरकका चाम्रीसकेका अवयवहरु ! उ आइमाईको आदिम रुपमा अवतरित हुन लागि ! सपेराले नागलाई नचाउन बिन बजाउँदै विभिन्न मुद्रामा गर्ने विभिन्न अभिनयको प्रयोग उ रुद्रराजमाथि गर्न थालि । उसका हात मुख शरीर र लत्रिएका सिङ्-जुरा सबै रुद्रराज माथि खनिए ।
‘तिमीलाई मैले भेटेको दूइ मिनेट पनि भएको छैन त्यो पनि जीवनको पहिलो भेट ! तिमी अर्को दूइ मिनेटभित्रमा के सुरुवात र के समाप्त गर्न चाहिरहेकी छौ ?’ अलमल्ल रुद्रराजले अकस्मात अप्रत्यशित प्रतिरोधपूर्ण भाषा बोल्यो ! तिमी भन्थ्यौ – ‘मलाई सन्चो भएन एकछिन जसरी पनि आउनु । म आँए तर तिम्रो बिमारको उपचार सायद गर्न सक्दिन न तिमीमा चढेको यो विषको वेग नै उतार्न सक्छु - अरु कुनै डाक्टर वा धामी खोज ।‘
‘तपाइँ त पुरुष हो नि !’ उ सोच्दथी उसले भनेका हरेक कुरा हरेक मान्छेले पत्याउँछन् । उसका हरेक कृयाकलापलाई हरेक मान्छेले स्वीकार्छन । तर रुद्रराज……!
‘हो म पुरुष हो र पुरुष हुनुको अर्थ तिमीले चाहेको सबै गर्नु पनि त हैन नि । साँढे पनि पशु जातिको पुरुष हो तर म साँढे हैन, मान्छे हो । मान्छे र पशुमा फरक छ । त्यो फरक तिमीले पनि देखाउन सक्नु पर्छ । तिमीभित्र सहासा उठेको एउटा जैविक साहस मात्र हो- यो ! त्यसको सहज प्रयोगका लागि एक पुरुषलाई पशु बनाउन खोजिरेहकी छौ !’
‘तपाइँले मेरो प्रेम अझै बुझ्नु भएन !’
‘मेरो बुझाइमा प्रेम भनेको जैविक सम्वन्ध हैन । प्रेम भनेको कोठाभित्र शरीर नाङ्ग्याएर खेलिने खेल हैन । प्रेम भनेको शरीरवाट उत्पन्न रागात्मक उष्ण भाव हैन, मनको गहिराइबाट पल्लवित हुने मानसिक आभास हो । परिपक्वतामा परिणत भएपछि पाक्ने एउटा मीठो फलको चिचिलो जस्तै हो- प्रेम ! मष्तिष्कले गर्ने खेती हो शरीरले शरीर फाड्ने खेल होइन- प्रेम ! तिमीभित्र मडारिएको वासनाको भेल बगाउने नाली हैन- प्रेम ! प्रेम, प्रेम हो- प्रेमको बास मनामा हुन्छ, शरीरिक बासनामा हैन । शरीरिक रागभित्रबाट उत्पन्न हुने राप हैन दूई मनलाई डोर् याउने एउटा “राह” हो- प्रेम ! ’हरेक कुराको सीमा र समय हुन्छ । अनि हरेक कुराहरु सीमाभित्र आवद्ध र समय अनुरुप परिपक्क हुनु पर्छ । तिम्रो प्रेमले शरीरको लेनदेनको संकेत मात्र गरेको छ ।‘
‘भेट्नासाथ हठात तिम्रो शरीरले मेरो शरीर तौलन थाल्यो भने यी शरीरले अरु धेरै शरीहरु तौलन सक्छन् । म तिमीसँग शरीरको लेनदेन गर्न तयार हुन सक्दिन । प्रेमको मूल्य यो होइन, वासनाको शतरंजमा जीउँदो मासूको मोलमोलाई मात्र हो । जीवनलाई खेला बनाएर शरीरलाई खालको दाउमा राख्यो भने सयौ जुवाडेहरु खेलप्रेमी बनेर आउन सक्छन् । ति सबलाई तिमी प्रेमको परिभाषाभित्र आवद्ध गर्न चाहिरेकी छौं ! रछानमा भाँडा मस्काए जस्तो ओछ्यानमा रुक्ष शरीर मस्काएर प्रेमलाई परिभाषित गर्न सकिदैंन ।‘
उ ढोका खोलेर बाहिर निस्कियो । सोच्यो – ‘नारी के हो ?’
जीवनमा पहिलोपटक भेटेकी र भेट्नासाथ मदोन्मत नागदेवीको अवतारमा अवरतिर नारीको त्यो भयावह रुप देख्न वाध्य रुद्रराजले फेरी सोच्यो – ‘आखिर नारी के हो ?’
उत्तर पायो - नारी देवी हो ! नारी माता हो ! नारी दिदी हो ! नारी बहिनी हो ! नारी छोरी हो ! नारी पत्नी हो ! नारी प्रेमिका हो ! नारी शब्द स्वयंमा “आदर्श र आदर” हो । तर वेश्या पनि नारी नै हो !
नारीको बारेमा सोच्दै उ जहाँबाट फर्किरहेको थियो जावेद खानको गाडी उतै हुँइकिरहेको थियो !